Ashun U Ottama - An Arakanese from Myanmar
Arakan People‎ > ‎
Ashun U Ottama
Upon his return to British Burma, U Ottama started his political activities, toured the country, lecturing for YMBA (Young Men Buddhist Association) and giving anti-colonial speeches. In 1921, he was arrested for his infamous "Craddock, Go Home!" speech against Craddock Scheme by Sir Reginald Craddock, the then Governor of British Burma. He was imprisoned several times for sedition, but he carried on. He was one of the first monk to enter political arena and the first person in British Burma to be imprisoned asaresult of makingapolitical speech, followed byalong line of nationalists such as Aung San and U Nu. According to academics, between 1921 and 1927, U Ottama spent more time in prison than outside.
U Ottama is seen as both the first true martyr of Burmese nationalism and father of the modern Arakanese nationalist movement. U Ottama is seen as the first of Myanmar's long list of political monks, who had stood up for the Burmese people in times of strife, either under colonial, democratic, socialist or military rule. His monastery in Sittwe, the Shwe Zedi Monastery, continues to be an important focal point in the Burmese political movement - the recent August-September 2007 riots were sparked when monks at the Shwe Zedi monastery began to march to the Sittwe Prison demanding the release of an activist.
The Light of Asia, U Ottama ...................................... While Myanmar being under the darkness, He appeared in the western, Arakan Kingdom To give the ray for the people under the dark. While the whole Myanmar People being the full of being afraid, He dare to the "Craddock" " Hi, Craddock!" “GET OUT!" While the other leaders being honored, He is forgotten by the people of Myanmar To honor him, "the Light of Asia." While the memorials days of others held inside Myanmar, The unforgettable day for him isn't allowed inside it To celebrate the unforgettable day of his demise. However the times and years pass by, However they insult your gratitude, Despite you had already been death, You are always alive in our Arakaneses' heart. ---------------- 3-09-2009
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအကြောင်း ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ (ငယ်နာမည်.ပေါ်ထွန်အောင်)ကို ၁၈၇၉၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့၊ ရူပရပ် အဖဦးမြ၊ အမိ ဒေါ်အောင်ကျော်သူ ရို့မှ မွီးဖွားပီးခသည်။ သက်တော် (၁၆) နှစ်အရွယ်မှာ မိဘများက မောင်သျှင်ဝတ်ပီး သဖြင့် ရှင်ဥတ္တမဟူသော ဘွဲ့နာမည်တွင်လာသည်။ နက်နဲရေ ပိဋ္ဋကတ်စာပီများကို ပခုက္ကူမြို့ ရေစကြိုတိုက်တွင် လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့တွင် လည်း ကောင်း ဆည်းပူး လေ့လာခဖူးသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ရှေးခိုက် အမျိုးသားကောလိပ်တစ်ခုမှာ ပါဠိနှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာ စာပီဆိုင်ရာ ယာယီပါမောက္ခအဖြစ် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ခသည်။ အိန္ဒိယတွင် ဟိန္ဒူမဟာဆပ်ဗာအသင်းကြီး၏ ဥက္ကဌအဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံခရသည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၈ နှစ်ကြာ နီထိုင်ခပြီးနောက် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ပညာသင်လားရောက်ခသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် သင်ကြားနီစဉ် ရုရှား-ဂျပန်စစ်ပွဲ (၁၉ဝ၄-ဝ၅) တွင် ဂျပန်က အင်အားကြီးမားသော ပြိုင်ဘက်ရုရှားကို အနိုင်ရလိုက်သည်ကို တွိ့ရပြီး နောက်။ ယင်းအချိန်က အာရှသားရို့အတွက် ဂျပန်သည် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်လို့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမက ယုံကြည်စွာအတိုင်း ၁၉ဝ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နိန့်မှာ ရန်ကုန်ကဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခသည်။ ဂျပန်မှာ ၂ နှစ်ကြာ ပညာသင်ကြားခပြီး ၁၉ဝ၉ ခုနှစ်၌ ဂျပန်တွင် တရုတ်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နီရေ ဒေါက်တာဆွန်ယက်ဆင်က ဆရာတော်ကို လေး စားခပြီး တရုတ်ပြည်သို့ သူနှန့်အတူ လိုက်ဖို့ပင့်လို့ တရုတ်ပြည်သို့ လေ့လာရေးအနီနန့်လားရောက်ခသည်။ ယင်းအချိန်ကပင် ဦးဥတ္တမသည် အာရှအင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ အရေးပါမှုကို လေ့လာသိဟိသတိပြုနိုင်ခသည်။၁၉ဝ၆ မေလမှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ဝိုင်အမ်ဘီအေ ခေါ် ဗုဒ္ဓွကလျာဏယုဝအသင်း၏ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ အရှိန်အဟုန်ရရန် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမက ဝင်ရောက်အားပီးကူညီခသည်။ ယင်းအခါက သူရိယသတင်းစာမှာ ဆရာတော်၏ နိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်ပုံများကို အထူးအားပီး ဖော်ပြသော သတင်းစာကြီး ဖြစ်ခသည်။ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ တိုက်တွန်းချက်ဖြင့် ၁၉၂ဝခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် သံဃာ့သမဂ္ဂ အဖွဲ့ပေါင်း (၃ဝ) ကျော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပနိုင်ခသည် ။ ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဦးဥတ္တမ နိုင်ငံရေးမျိုးစိချပီးခရေ အဟုန်ကြောင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သပိတ် စတင်မှောက်ကြသည်။ ယင်းပိုင် မြန်မာပြည်သူများ မကျေမနပ်ဖြစ်နီဂတ်ကေလေ့ မိမိရို့၏ ဆန္ဒကို ဖွင့်ဟ ထုတ်ပြခြင်း မပြုဝံ့ ဖြစ်နီချိန်တွင် ဆရာတော်က ဘုရင်ခံ ကရက်ဒေါက်ပါးကို စာတစ်စောင် ရွီးပို့လိုက်သည်။ ယင်းစာမှာ “ ဆာရယ် ဂျီနယ် ကရက်ဒေါက် မင်း- မြန်မာပြည်က ထွက်လား” ဟုဆိုထားသည်။ အဆိုပါနှင်စာကို သူရိယ သတင်းစာက ထည့် သွင်းဖော်ပြခရာမှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံး မျက်လုံးပြူး အံ့အားသင့်လားခရေ။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည်၁၉၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်နိန့်တွင် ဖျာပုံခရိုင် ဒေးဒရဲမြို့နယ် ဆူးကလပ်ရွောတွင် “လိပ်အခွံ ခွာရမည်” ဟူသော ခေါင်းစဉ် ဖြင့် တရားဟောပြောမှုကြောင့် မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် အစိုးရအကြည်ညိုပျက်အောင် တရားဟောသည်ဟုဆိုကာ ရာဇသတ် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂၄ (က) အရ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာဆရာတော်ကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရက ဖမ်းခသည်။ ဆရာတော်သည် မြန်မာပြည်တွင် နိုင်ငံရေးမှုဖြင့် ပထမဆုံး အပြစ်ပီး ခံရသောသူဖြစ်သည်။ ယင်းပိုင် မြန်မာပြည်သူအားလုံးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပမာ နိုင်ငံရေး မျက်စိဖွင့်ပီးခသူဖြစ်သည်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် မြို့လုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကြီးခေါ်၍ “အစိုးရလုပ်စွာမကောင်းလျှင် မကောင်းဟု ဝေဖန်ခွင့်စွာ လူ့အခွင့်အရေးပဲ၊ ယင်းအခွင့်အရေး စွာ ငါရို့မှာဟိရမည်။ ယင်းကြောင့် ငုံ့မခံကေ့”ဲ စသော အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတရားတော်ကို အကြီးကျယ် ဟောခသည်။ ယင်းပိုင်ဟောပြောပြီး ၇ ရက်အတွင်းမှာပင် ဆရာတော်စွာ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပြီး အကြည်ညို ပျက်ပြားအောင် လှုံ့ဆော်ရေဆိုဗျာ ရန်ကုန်တွင် ဖမ်းဆီးခံရသည်။ ဆရာတော်သည် အလုပ်ကြမ်းနန့် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ် ဒုတိယအကြိမ် အပြစ်ပီး ခံခရသည်။ ဦးဥတ္တမသည် ၁၉၂၇ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ၃နှစ်အကျဉ်းကျခံဘဝမှ လွတ်မြောက်လာပြီး မတ်လ (၂ဝ)ရက်နေ့၌ ပဲခူးမြို့တွင် ကျင်းပသော သံဃာတော်များသြဝါဒခံ ဦးစိုးသ်ိမ်းကြီးမှူးသော မြန်မာအသင်းချုပ်ကြီး (ဂျီစီဘီအေ)၏ ၁၄ ကြိမ်မြောက် အစည်း အဝေးသို့ တတ်ရောက်ပြီး သင်္ကန်းရုံကိုဖယ်၍ ထောင်ဝတ်ထောင်စားဖြင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခသည်။ ဦးစိုးသိမ်းက “ပရိသတ်တ်ိမြင်ဂတ်လား။ မျက်ရည်ကျရုံနှင့် အိမ်ပြန်လားသင့်လား။ အများကြီး အရေးကြီးသည်။ ယခု မျက်ရည်ကျ ခြင်းစွာ အမျိုးသားရေးအတွက် မျက်ရည်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ သာသနာတော်ကြောင့် မျက်ရည်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင် ခွင့်ပြုသောသင်္ကန်းကို ချွတ်၍ အာဏာတန်ခိုးဖြင့် ဦးဥတ္တမကို ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်သည်။ အဂု အချိန်ကစ၍ မိမိအသက်ကို မငဲ့ဘဲ ဆောင်ရွက်ရမည်” ဟု ငို၍ပြောလေသည်ဟု စစ်ကိုင်းဟန်တင်၏ မြန်မာနိုင်ငံတော်မှတ်တမ်း (၃) တွင် ဖော်ပြထားသည်။ မိမိတွင်ရှိသမျှ ဉာဏ်အား ခွန်အားတိနန့် အစွမ်းကုန်ထုတ်သုံးပီးဆပ်ခရေ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ဗမာလွတ်လပ်ရေးမရခင် (၉)နှစ်အလို ၁၉၃၉ခုနှစ်တွင် ပျံလွန်တော်မူလခပါသည်။ ဆရာတော်ပျံလွန်တော်မူရေနိန့်ကို ထိုစဉ်ကရှိခဲ့သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်က “ဦးဥတ္တမနေ့” အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်ကြေညာပေးခဲ့သည်။ ရွှေတိဂုံ ခြေတော်ရင်း တော်ဖက်မုခ်အနီးရှိ ကန်တော်မင် ပန်းခြံကို “ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံ” အဖြစ်သတ်မှတ်ပီးခသည်။ အလားတူ စစ်တွေမြို့တွင်ဦးဥတ္တမပန်းခြံ တခု ပြုလုပ်ပီးခပါသည်။ ယေကေလေ့ဂနိခါ ကန်တော်မင်ပန်းခြံက “ဦးဥတ္တမ အရုပ်ကိုဖယ်ပနာ မထင်မရှား ဗမာနိုင်ငံရေးသမား ဦးဝိစာရကိုအစားထိုးပလိုက်ဗျာလ်။ ကန်တော်မင်္ဂလာပန်းခြံထဲက ဆရာတော်အရုပ်သည်ချောက်ထဲကျနိဂုံးချုပ်လခဗျာလ်။ ............လန်းဆန်းမှက်ချက်...(ဆရာတော်လမ်းစဉ်ကိုကြိုက်လို့မဟုတ်..ဒေပိုင်တော်ခရေကိုယ့်အမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အကြောင်းကိုငါရို့မထိန်းသိမ်ကေ ထိန်းသိမ်းဖို့လူမဟိဗျာလ် ဆိုရေစိတ်ဓါတ်နန့် တင်ပီးလိုက်သည်။)
http://thelightofaisa.blogspot.com/2009/09/blog-post_1940.htmlAshin U Ottama, who pioneered the independent spirit by U Ba Yin U Ottama and Diarchy by U Mya Tun Aung Comments